Geo web Publisher, waxay u muuqataa mid fudud - Geofumadas
Luulyo, 2009 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, aragti ugu horeysay
Dib u eegida waxa hadda la daabacay Geoweb Publisher V8i, waa arrin shakhsi ah in alaabtan ay lahayd muuuucha horumar, inkastoo macquulka ah la hayo, waxaa jira isbedel weyn oo waxa uu ahaa qalab heer hoose ah, waayo, ad-injineerada daabacaan ay dulinka xogta iyo waxa hadda waa soo jeedinta ku saabsan ujeedooyinka geospatial.
V8i version ayaa ii yimid, waxaan doonayaa inaan sameeyo dib-u-eegid, laakiin ka hor, waxaan fursad u helayaa inaan ka hadlo waxa ay horey u ahaayeen si aan loo dhigin maqaalkii isbarbardhigga ahaa oo aad u culus iyo in la xusuusto daciifnimada halkaa joogtay.
Wargeyska - Wargeeyska GeoWeb
Ugu horreyntii, Publisher wuxuu ahaa geofundada adagtahay in la hirgeliyo, maaddaama ay ku mashquulsan tahay waxyaabo badan oo la ogsoon yahay oo ay ka mid yihiin shaqooyinka Microstation iyo Juquraafi ahaan dhaxaltooyada ah. lahayn saaxir ama template walxood, wax kasta oo lahaa si ay u dhisaan on foot. Waayo, 2004 waxaa la sii daayay Geoweb Publisher in mar hore ka mid ahaa kii saaxir ah celceliska abuuraya pages aasaasiga ah mab iyo wax kasta oo lahaa cibstryudi la Daabacaha (musmaarro) wuxuu ahaa dembi aan mowjadda horumarka. Kale oo aan ahayn in aan lahaa inay maalgashi ku qabsado in la beddelo.
Markii aan aad u hesho Publisher Geoweb, Bentley empecinarse joojiyay la applet Java, kuwaas oo ay soo gaareen la Microstation J. soo baxay uu iska ActiveX Bentley yeedhay Vpr, sida gaabinta ah waxa la samayn karaa: view, print iyo redline.
Adeegga qaab images ahaa dhibaato lahayn, dhibaatada had iyo jeer xogta dulinka siladda ahaa, inkastoo xogta waa u adeegeen via qiimey, haddii la sii daayo hore loo baahan yahay rakibo of a more shinka badan gaar Java (JRE) engine, fulinta AcitveX ee la xiray si ay shuqulka oo keliya Internet Explorer, oo waxaa la dhigi karaa isaga ordo markii ugu horeysay, haddii xiriir ah ayaa gaabis ah oo samir yar (ama aqoonta wixii ka dhacayay xogta ansixin beerka) lahaa
Wax kasta oo uu sameeyey vpr ahaa qaab fudud ee DGN, laakiin waxa suurto gal ahayd in ay u adeegaan ku dhawaad ​​wax ka dhigay Geographics maxaa yeelay, ku dhaqanka Daabacaha Geoweb laftiisa ahaa Geographics ka server ka shaqeeya. Sidaas sixir ahaa in yaabab loo sameeyey on Geographics, ugu adeegi kara mowduuc, falanqaynta topological, oo ay ku jiraan magaabo-vectorized online iyo this ayaa lagu daray sida file redline la xidhiidha in DGN asalka ah. Dabcan, itaaldarradeenna XM ka hor, waxaad sameyn karay ma jirin hufnaan haddii geofumaran la sameynayo Sawirro PictureScript (PSS) lahayn calaamadaha firfircoon, oo ahaa qeybtii jabay xakamaynta miisaanka, sida dhabta ah qiyaasta ma ahan habka caadiga ah iyo marka mawduuc laga soo saaro faylka cusub ee abuurka ah waxaa lagu lumay boos bannaan sababo qariib ah.
Waxay u baahan tahay khayraadka dhimashada ee ka imaanaya serverka, waayo noqoshada jadwalka adeega ee ku shaqeynaya Geographics ee codsadaha isticmaalaha ayaa la fahamsan yahay. Inkasta oo aan qirsanahay in ay tahay wax la yaab leh, haddii aan tixgelineyno in 25,000 ay koreen qaabka fiilooyinka ee wareegyada ilbiriqsiyada, mar marka ay dhaceen cusboonaysiinta lagama maarmaan ahayn heerka zoom, laga bilaabo Pan ka baxsan xadka. Sidoo kale isdhexgalka mashruuca Guddiga Wise ayaa loo oggolaaday kantaroolka shaqada iyo ururada dukumentiyada dibadda iyada oo loo marayo Web Explorer Lite.
All waxaa sameeyey la raacayo tilmaamaha mashruuca Geographics ah, oo si fiican u noqon kartaa in Oracle, SQL ama Access. suuqa kala bandhigay ayaa afarta gees oo daaha, iyo falanqaynta da'ayeen dhigay on file Index akhriyi ka dibna tixraac ku raran DGN ka diiwaan gashan view in (ama tababare map-ka). ciidamo Tani ma aha markii hortiisa caadi ah, sida msliks noqday walxaha hyperlinks aadin database ah iyo sidaas muujiyaan laga yaabaa in miiska la xiriira.
Kadibna, waxay u oggolaatay in la isku habeeyo qaybaha iyo sifooyinka geedka dambe si ay u noqdaan ama u baxaan. Kuwa xaddidan furayaasha weydiinta khariidado isku dhafan oo fuliya hawlaha Microstation ee caadiga ah: dami ama leexo lakab (heerar), lifaaq Khariidado tixraac ah, sawirro, jooji, jimicsiyada mdl, codsiyada macruufka ama vba.
Ma jiraan heerar
Laakiinse ma uu jirin heerarka Nice halkaas, waxa uu ahaa jiitaa keligeed Bentley ee style iyaga. In labada jagooyinka suuragal ah keliya: iscasilaadda in qofka aad la hadlaysaan waa fajarse gacmo ama isjacayl in uu yahay GNU ah gadhka guumeyso, oo horay ugu NASA iyo hadda waxaa ka go'an in samaynta GIS.
Waxaan eegay Geoweb Publisher v8i, iyo ixtiraamyadayda. Waxaan u maleynayaa in Bentley tani waxay hagaajineysaa aragtida uu u leeyahay isticmaalaha caadiga ah, kaasoo aan haysan Walter Mercado oo isaga ku xigta si uu u sharaxo warqadiisa maalin kasta. Samee fududee, waxay noqon kartaa, runta ayaa ah in hadda ay leedahay macquul badan oo la fahmi karo ee socodka shayga laga dhisay si adeega.
Laakiin halkii uu ka sugi hirgelinta fudud, xoogga waxa uu sameeyaa waa u xiiso badan, sida horumar ah ee DPR heer hoose ah, sida hadda IDPR ii muuqataa qurux badan oo ku saabsan fikradda ah database aan ollogga (ka map-ka), halkaas oo ay suuragal tahay dhexgalaan labada billabo, dgn, iyo xataa shinka xfm qaab files taas oo ka dibna u adeegay ka xog ah database da'ayeen.
Ka dibna wuxuu taageerayaa heerarka OGC.
Waan arki doonaa maalmaha soo socda.
Bentley Systems Dgn Dwg My aragti ugu horeysay
Post Previous«Previous Liiska Barnaamijka Waxaan dib u eegay
Post Next 6 daqiiqado kalsooni ah ConstrucGeekNext »